Rano Estradiol Enanthate (4956-37-0) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Hormones vehivavy / Estradiol poids Series / Estradiol vitsika fanosotra
SKU: 4956-37-0. Sokajy: Estradiol poids Series, Hormones vehivavy
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra azo avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny paingotra Estradiol Enanthate (4956-37-0), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Estradiol enanthate vovoka dia hormona estrogen vavy. Miasa amin'ny alàlan'ny fanolo ny ety ivelany ao amin'ny vehivavy iray izay tsy afaka mamokatra estrogen ampy intsony. Manan-kena manome ny fahadiovana 99% Poids Estradiol Enanthate (CAS 4956-37-0) mba hanoloana ny zavaboary voajanahary ao amin'ny vehivavy iray na hanohanana ny hormonina vehivavy hormones.
Lahatsary vovoka poizina Estradiol
Estradiol Enanthate karazam-borona fototra fototra
Name: Estarriol Enanthate
Formula Molecular: C25H36O3
Meny fitetezana 384.55
Estradiol Enanthate enanthate ny fampiasana vovoka amin'ny tsingerim-pandaminana
Ny vovonan'aretina estarriol (CAS 4956-37-0) (INN, USAN), na heptanoate estradiol, dia estético sy steroid estrogen ary estège estète.
Eo amin'ny fampiasana poofilam-boalavo Estradiol
Ampiasao ny proteinina estradiol araka ny baikon'ny dokotera. Jereo ny mari-pamantarana momba ny fanafody ho an'ny torolàlana amin'ny dosing marina. Jereo ny mari-pamantarana momba ny fanafody ho an'ny torolàlana amin'ny dosing marina.
Fampitandremana amin'ny vovo-tsolosaina Estradiol Enanthate
Tsy tokony ampiasaina ny aretin'ny ati-lôjia raha misy: aretina ateraky ny aretin-koditra, aretim-pianakaviana, ratra tsy fahita firy, tantara momba ny homamiadan'ny hormone (toy ny tratra, ny tranonjaza, ny oviana, na ny homamiad ny tiorka), na raha manana fo fanafihana, famelezana, na ratra.
Estrogens dia nitatitra ny hampitombo ny kanseran'ny homamiadan'ny kanseran'ny vehivavy voan'ny homamiadana indrindra indrindra amin'ny vehivavy izay mahazo fitsaboana hormona fotsiny. Mety hampitombo ny mety ho voan'ny kanseran'ny ovaire na ny nono koa ny etrokazo. Tsy azo ampiasaina mba hampihenana ny aretim-po ny vokatra azo avy amin'ny ety ivelany. Ny hormonina nomena amin'ny hormone iray hafa (progestine) ho an'ny fanoloana therapycan dia mahatonga aretim-po tsy misy indrafo (ohatra: fanafihan'ny fo), fikorotanana, teboka goavana ao amin'ny tongotra na ny havokavoka (embolism ny foza / trombosona lalina), dementia, ary homamiadan'ny nono. Ireo loza ireo dia miankina amin'ny halavan'ny fotoana estradiol cypionate dia ampiasaina ary ny habets of estrogen per dos. Noho izany, ny estradiol cypionate dia tokony ampiasaina mandritra ny fotoana fohy mety amin'ny fotoana mahazatra indrindra amin'ny dosie faran'izay tsara, mba hahazoana tombontsoa sy hampihenana ny vintana amin'ny fiantraikany ratsy amin'ny fiharetana maharitra.
Estradiol Enanthate Pulver (CAS 4956-37-0)
Orinasa mpanodina Estradiol Enanthate Marketing
Ahoana ny hividianana vovoka Estarriol Enanthate (CAS 4956-37-0) avy amin'ny AASraw
AAS mena manome ny fahadiovana 99% Estradiol manala vovony menaka mba hanolo ny fiterahana voajanahary amin'ny vehivavy.
Estradiol Enanthate Recipes
Poids mifepristone (84371-65-3)
Megestrol acetate poids
Allylestrenol poopy (432-60-0)